မေစစ်ပိုင်| December 25, 2012 | Hits:6,919
| | သေမင်းတမန် ရထားလမ်းပိုင်းတခုကို ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချန ဘူရီမြို့နယ်အတွင်း ကွေးမြစ်ပေါ် ဖြတ်၍ ဆောက်လုပ် ထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – wherewasitshot.com)
ထိုင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့် ဖူးခက် ကမ်းခြေမှ ပြည့်တန်ဆာများADB က မြန်မာကို ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၅၆၀ ပေးထားသီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကုမ္ပဏီ ၂၁ ခု လက်မှတ်ထိုးစတော့ အိတ်ချိန်း ၀င်ရန် ပြည်တွင်း ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးများ မသေချာသေးပဲလောက သိန်းသောင်းချီ အရှုတ်အရှင်း ထပ်မံ ဖြစ်ပွား
Salai Lian December 26, 2012 - 12:30 pm Burma has hundreds of thousands of soldiers whom we do not really need them. The government must let them work for this project. Provide them tools and send them there.
Reply ပြည်သူ December 26, 2012 - 9:11 pm “မြန်မာ-ထိုင်း သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း” တဲ့.. ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ကြီးဗျာ။ နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောင်းခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။